नेपाल बैंकर्स संघ भन्छ-वाणिज्य बैकहरुमा मात्रै ४० हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छौँ - Aarthiknews
नेपाल बैंकर्स संघ भन्छ-वाणिज्य बैकहरुमा मात्रै ४० हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएका छौँ
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र रोजगारीका लागि आकर्षकको केन्द्र विन्दु बन्न पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) हरुको छाता संस्था नेपाल बैंकर्स संघले हाल सञ्चालनमा रहेको २७ वाणिज्य बैंकले ४० हजारलाई रोजगारी दिएको जनाएको छ । बैंकर्स संघले गत असारसम्म उक्त संख्यामा कर्मचारी रहेको जनाएको छ ।
कति नागरिकलाई वाणिज्य बैंकले रोजगारी दिएका छन् भन्ने सम्बन्धमा तथ्यांकहरु वाहिर नआइ रहेको बेला बैंकर्स संघले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । मुलुकमा सञ्चालनमा रहेको विकास बैक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्तले पनि ठूलो मात्रमा रोजगारी दिएका छन् । त्यसलाई भने बैंकर्स संघले आफ्नो गणनामा राखेको छैन् ।
अहिले २७ वाणिज्य बैंक बाहेक २५ विकास बैंक, २२ फाइनान्स कम्पनी, ९१ लघुवित्त संस्था र १ इन्फास्टकचर बैंक सञ्चालनमा छन् । यसका साथै बिमा कम्पनी, सहकारीले पनि ठूलो सख्यामा रोजगारी दिएका छन् ।
विदेशी मुलुकमा औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिएपनि नेपालमा भने प्रयाप्त मात्रमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना हुन नसक्दा रोजगारी दिन सकिएको छैन् । औद्योगिक क्षेत्रले रोजगारी दिन नसके पनि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स, लघुवित्त, बिमा, सहकारीले रोजगारी दिने काम गरेका छन् । नेपालको कुल पौने तीन लाख जनसंख्यमा उक्त क्षेत्रले धेरै रोजगारी दिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर प्रत्येक नागरिकको घर आगनमा पुग्न थालेका छन् । त्यसक्षेत्रमा समेत ती संस्थाले रोजगारी दिँदै आएका छन् । एक महिना अघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकमा बैंकिड पहुँचको ६०.९ प्रतिशत पुगेको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।
राष्ट बैंकले लघुवित्त र सहकारीले पुर्याएको पहुँच भने ६०.९ प्रतिशतमा समावेश गरेको छैन् । त्यो पनि समावेश गर्ने हो भने यो भन्दा धेरै पहुँच पुग्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीहरुमा रहेको तीन पुस्ते विवरणमा विश्लेषण गरी एक व्यक्तिको एक भन्दा बढी रहेका खाताहरुलाई हटाएर हेर्दा करिव १ करोड ८० लाख निक्षेप खाता रहेको उक्त अध्ययन प्रतिबेदनले देखाएको थियो ।
बैंकिडं. पहुँच कति प्रतिशतमा पुग्यो भनेर पत्ता लगाउन एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले बैंकिड. पहुँच करिव ६१ पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । केही वर्ष अघिको तथ्यांकले ४० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिड. पहुँचमा भएको देखाएको थियो । अहिले पनि केही व्यक्तिले त्यही तथ्यांकका आधारमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए ।
गत साउनसम्म निक्षेप खाताको संख्या २ करोड ७९ लाख पुगेको छ  । ‘निक्षेप खाताको संख्यालाई हेर्दा कुल जनसंख्याको ९४.१ प्रतिशत जनसंख्या बैंकिड.पहुँचमा रहेको देखिन्छ,’ राष्ट बैंकको तथ्याांकमा भनिएको छ, ‘तर, एकै व्यक्तिले चार–पाँचवटा बैंकमा समेत खाता खोल्ने गरेका कारण उक्त तथ्यांकले वित्तीय पहुँचको वास्तविक र स्पष्ट अवस्था देखाउँदैन  ।’
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शाखा विस्तारलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । हाल सबै वर्गका समेत गरी कुल १ सय ६७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेका छन् । कात्तिकसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ९ हजार २ सय २३ शाखा पुगेका छन् । । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक शाखाले ३ हजार ३ सय ६३ जनालाई सेवा दिइरहेको छ।
हाल मुलुकका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४१ तहहरूमा वाणिज्य बैंकका शाखा विस्तार भइसकेका छन् । अझै १२ स्थानिय तहमा बैंकका शाखा पुग्न सकेका छैनन् । सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेसँगै बैंकिड.पहुँचको अवस्थासमेत विस्तार हुने र रोजगारीको थप अवसर प्राप्त हुने बैंकर्स संघको भनाइ छ ।